Jenesis 39 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Josef jewere ozi n’ụlọ Pọtịfa (1-6)
Josef jụrụ ime ihe nwunye Pọtịfa kwuru (7-20)
A tụrụ Josef mkpọrọ (21-23)
39 A kpọọrọ Josef gbadata n’Ijipt,+ Pọtịfa+ onye Ijipt wee zụrụ ya. Pọtịfa na-eje ozi n’obí Fero, ọ bụkwa onyeisi ndị nche Fero. Ọ zụrụ Josef n’aka ndị Ishmel+ ahụ kpọ ya gbadata n’Ijipt. 2 Ma Jehova nọnyeere Josef.+ N’ihi ya, ihe nọ na-agaziri ya, e mekwara ya onye na-elekọta ụlọ nna ya ukwu, onye Ijipt. 3 Nna ya ukwu hụrụ na Jehova nọnyeere ya nakwa na Jehova na-eme ka ihe niile ọ na-eme na-aga nke ọma. 4 Ihe Josef nọ na-amasị nna ya ukwu, Josef ghọkwara onye ozi ya ọ tụkwasịrị obi. N’ihi ya, o mere ya onye na-elekọta ụlọ ya, o nyefekwara ya ihe niile o nwere. 5 Malite n’oge o mere ya onye na-elekọta ụlọ ya na onye na-ahụ maka ihe niile o nwere, Jehova nọ na-agọzi ụlọ onye Ijipt ahụ n’ihi Josef. Jehova nọkwa na-agọzi ihe niile o nwere n’ụlọ nakwa n’ubi.+ 6 O nyefeziri Josef ihe niile o nwere ka o lekọtawa. E nweghịkwa ihe ọ bụla ọ na-etinye uche na ya, ma e wepụ nri ọ na-eri. Josef bịakwara gbaa dimkpa ma maa mma nwoke. 7 Mgbe ihe ndị a mechara, nwunye nna ukwu Josef malitere ile Josef anya, na-asị ya: “Ka mụ na gị dinaa.” 8 Ma Josef jụrụ, ọ gwakwara nwunye nna ya ukwu, sị: “Lee, nna m ukwu amaghị ihe ndị dị n’aka m n’ụlọ a. O nyefeekwala m ihe niile o nwere ka m lekọtawa. 9 E nweghị onye karịrị m n’ụlọ a. O nyefere ihe niile n’aka m ma e wepụ gị maka na ị bụ nwunye ya. Gịnịzi mere m ga-eji eme ihe a jọgburu onwe ya ma mehie Chineke?”+ 10 Kwa ụbọchị, nwaanyị ahụ na-enye Josef nsogbu, ma Josef ekweghị ka ya na ya dinaa ma ọ bụ ka ya na ya nọrọ. 11 Otu ụbọchị, Josef banyere n’ụlọ ka ọ rụọ ọrụ ya, ma e nweghị otu onye n’ime ndị na-eje ozi n’ụlọ ahụ nọ n’ụlọ. 12 Nwaanyị ahụ jidere ya n’uwe, sị ya: “Ka mụ na gị dinaa!” Ma Josef hapụụrụ ya uwe ya gbapụ n’èzí. 13 Ozugbo ọ hụrụ na Josef hapụụrụ ya uwe ya gbapụ n’èzí, 14 ọ malitere iti mkpu, na-agwa ụmụ nwoke na-eje ozi n’ụlọ ya, sị: “Leenụ, ọ kpọtaara anyị nwoke Hibru a ka o jiri anyị mere ihe ọchị. Ọ bịakwutere m ka o dinaa m, ma m malitere itisi mkpu ike. 15 Ozugbo ọ nụrụ mkpu m na-eti, ọ hapụrụ uwe ya n’akụkụ m gbapụ n’èzí.” 16 Mgbe e mechara, nwaanyị ahụ chịsara uwe Josef n’akụkụ ya ruo mgbe nna ukwu Josef lọtara. 17 O wee gwa di ya otu ihe ahụ, sị: “Onye Hibru ahụ na-eje ozi ị kpọtaara anyị bịakwutere m ka o jiri m mere ihe ọchị. 18 Ma ozugbo m malitere iti mkpu, ọ hapụrụ uwe ya n’akụkụ m gbapụ n’èzí.” 19 Ozugbo nna ukwu Josef nụrụ ihe nwunye ya kwuru, sị: “Ọ bụ ihe a ka onye na-ejere gị ozi mere m,” o were oké iwe. 20 N’ihi ya, nna ukwu Josef kpọọrọ ya tụba n’ụlọ mkpọrọ, n’ebe a na-akpọchi ndị mkpọrọ eze. O wee nọrọ n’ebe ahụ, n’ụlọ mkpọrọ.+ 21 Ma Jehova ka nọnyeere Josef, ọ hụkwara ya n’anya* ma na-eme ka ihe ya na-amasị onyeisi ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ.+ 22 N’ihi ya, onyeisi ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ nyefere ndị mkpọrọ niile nọ n’ụlọ mkpọrọ ahụ n’aka Josef. Ọ bụ Josef na-ahụ na ha mere ihe niile ha kwesịrị ime n’ebe ahụ.+ 23 Onyeisi ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ anaghị etinye anya n’ihe ọ bụla o nyefere n’aka Josef maka na Jehova nọnyeere Josef. Jehova mekwara ka ihe niile Josef na-eme na-aga nke ọma.+
^ Ma ọ bụ “nọkwa na-egosi ya ịhụnanya pụrụ iche.”